Ebee ka ndị Spain anyị kacha eme njem? | Akụkọ Njem
Dabere na ọkwa nke weebụsaịtị wepụtara Kayak na nchọta ebe ndị Spaniards na-ele anya karịa oge, nsonaazụ ndị a tụbara bụ ihe ndị a:
Na usoro nke mba aga, a ga-atụ anya na onye mmeri na-achọ isi: n'ezie New York. Onye America gbasoro London, Rome, Paris y Bangkok.
N'aka nke ozo, gini na-ezo aka na -achọ maka mba aga, agwaetiti merie egwuregwu ahụ: na ndu Santa Cruz de Tenerifendị sotere Ibiza, Barcelona, ​​Madrid y Menorca. Ma gị onwe gị, ebee ka ịchọrọ ịga na ngwụsị izu ma ọ bụ izu ụka ọzọ ị ga-ezube?
1 Gịnị mere New York ji adọrọ mmasị anyị?
2 Santa Cruz de Tenerife, ebe kachasị amasị ọtụtụ ndị
Gịnị mere New York ji adọrọ mmasị anyị?
N'agbanyeghị nnukwu ego a ga - enwerịrị, ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ, iji chekwaa iji nwee ike ịgafe nnukwu ọdọ mmiri ma gaa New York, ọ na - aga n'ihu na - adị n'etiti ndị Spain, dị ka anyị hụworo, ebe mba ụwa họọrọ karịa ọtụtụ. Mana gịnị mere? Kedu ihe na-adọta uche anyị nke ukwuu banyere obodo ama ama America. Ndị a nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime ihe kpatara ya:
Anyị hụrụ ụlọ ndị toro ogologo n'anya. Anyị amaghị ma ọ bụ maka na anyị weere ha dịka ndị siri ike n’ụzọ anụ ahụ, anyị nwere mmasị ileli anya elu ma hụ ọtụtụ ụlọ toro ogologo gburugburu anyị. Ikekwe n'ihi na na Spain ha anaghị aba ụba, ma e wezụga na obodo ukwu, n'ezie.
Maka nnukwu Central Park. N'ime etiti obodo anyị nwere ike ịchọta ogige a nke na-erughị 3,4 square kilomita yana 90 kilomita anyị nwere ike ịga n'okporo ụzọ. N'ime ya anyị ga-ahụ site na ebe adịghị agwụ agwụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ rue ọdọ mmiri buru ibu ebe anyị nwere ike ịme ụdị ọrụ niile. N'ebe ahụ, a na-ahụkarị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị New York na ndị njem nleta na-eme ụdị egwuregwu niile: na-agba ọsọ, baseball (e nwere ụlọikpe ndị akwadoro maka egwuregwu America a ma ama), wdg.
Ebe kachasị mma maka ndị hụrụ ụlọ ahịa n'anya (na ha nwere ego maka ya, n'ezie). Enwere ụlọ ahịa ebe ahụ ebe anyị nwere ike ịchọta ngwaahịa ha dị ọnụ ala karịa na Spain. Dị dị ka Nike, Calvin Klein, Convers, nke Livaị Ha dị ọnụ ala karịa mba anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọta ha na ụlọ ahịa ama ama ama na-ewelata ego mgbe niile.
Maka nri ha! Na America, ọ bụghị ihe niile bụ nri ratụ ratụ na nri na-adịghị mma, ka ọ dị? Mana eziokwu bụ na ebe ka mma iri hamburger karịa n'okporo ámá n'okporo ámá dị n'ime New York? Ọ nwere ihe karịrị ndị America karịa nke ahụ?
Ndị a bụ nanị anọ n'ime ọtụtụ ihe kpatara anyị nwere ike ịnye gị ka ị gaa New York, ọ bụrụ na ịchọrọ ikwenye na ya (ị ga - abụ otu n'ime ndị Spain ole na ole na - achọghị nrọ ịga ebe ahụ), mana ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị nwe obodo na-eche na Ọ ka mma ịmara ebe ndị ahụ na Spen, erubeghị, tupu ị gawa mba ọzọ, n'okpuru anyị nyere gị ihe mere ị ga-eji gaa Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, ebe kachasị amasị ọtụtụ ndị
O juru anyị anya ịhụ na Santa Cruz de Tenerife bụ ebe ọtụtụ ndị Spain họpụtara na-achọ ịga njem mba na-enweghị oge. Agwaetiti a nwere ọtụtụ amara ma ọ bụrụ na ịmabeghị ihe ọ ga - enye gị, ebe a ka anyị gwara gị:
Gaa na Lọ ihe nkiri nke mmadụ na mmadụ.
Gaa Canary Islands Museum akụkọ ihe mere eme.
Lee Circle of Arts Arts nke Tenerife.
Gagharịa n'oké Ogige Spain ma ọ bụ site na Rambla de Santa Cruz.
Gaa hiking n'okporo ụzọ nke Enchanted ọhịama ọ bụ, nke pụrụ iche na ịma mma. Ọ bụ naanị ndị ọbịa nọ ugbu a, n'ihi mmebi ọ na-ata ahụhụ.
Gaa Ọchịchị Obodo Obodo Nwanyị Anyị nke Africa.
Sportsgba egwuregwu dị ka ndakpu mmiri ma obu 'okpokoro' n'ọtụtụ osimiri mara mma ya.
Na-ekwu okwu banyere osimiri, gaa na ihe atụ ndị Las Gaviotas beach ma ọ bụ Las Teresitas beach, ha abụọ maara nke ọma ma na-agakarị ndị bi n'àgwàetiti na ndị njem nleta.
Ma ugbu a na ụbọchị ahụ na-eru nso, nwee ọ theụ n ’ọhụụ nke ụwa ama ama Tenerife ejị.
Ma ugbu a, ị doro anya ihe kpatara anyị ji achọ njem gaa New York na Santa Cruz de Tenerife? Ka ị ka chọkwuru ihe kpatara ya? Gaa na ha ma ị ga-ahụ ndị niile anyị anaghị ekpughere ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » New York » Ebee ka ndị Spain anyị kacha eme njem?
Ọ bụ hamburger kachasị ihe ndị America? Biko, Hamburg ọ maara gị nke ọma? Ọ dị na Germany na hamburgers sitere ebe ahụ dịka nkịta na-ekpo ọkụ (Hotdogs) si Frankfurt dịkwa na Germany, ndị America na-ebubata ọtụtụ nri ndị Europe n'oge ha passage gafere Europe n'oge Agha IIwa nke Abụọ gụnyere pizzas si Italytali, ihe kachasị America nke ị hụrụ si Germany. Are na-amaghị ihe ma ha kwụọ gị ụgwọ maka ya.
Enyi Oscar. Onye na-esi nri sitere na Hamburg nke bi na United States n'oge ahụ mepụtara hamburger ahụ. Echere m, ọ kere ya n'ebe ahụ. Ya mere maka m ọ dịka American ka German. Ma nke ahụ bụ ma ọ dịkarịa ala bụ ihe a maara ruo ugbu a.